Lamaanayaasha Bollywood-ka Iska Dhex Doorteen Kuwooda Ugu Hadal Heynta Badnaa Balse Aan Is Calfanin Qaybta 2-aad (+Sawiro) – Filimside.net
Lamaanayaasha Bollywood-ka Iska Dhex Doorteen Kuwooda Ugu Hadal Heynta Badnaa Balse Aan Is Calfanin Qaybta 2-aad (+Sawiro)
Kusoo dhawaada qaybta labaad aan kaga hadleenay marka ay dhacday in jilaayaasha Bollywood-ka jecel dhex maro balse nadiib daro aysan is calfanin sida diiwaan gashan kuwooda ugu hadal heynta badnaa.
Salman Khan Iyo Aishwarya Rai Bachchan: Waa jaceylkii ugu hadal heynta badnaa uguna muranka badnaa ee ebid ka dhex dhasho lamaane Bollywood-ka iska dhex doorteen.
Salman iyo Aish waxay is fahmeen sanadii 1997 xili ay filimkii Hum Dil De Chuke Sanam wada duubayeen jaceylkooda wuxuu gaaray heer aan la qarin karin sidoo kalena ay Bollywood-ka ka wada marag kaceen waxa ka dhaxeeyay labadaan lamaane.
Laakiin nasiib xumo sanado qurux badan oo ay soo wada qaateen Salman Khan ayaa bur buriyay markii uu si qaab daran Aish ula dhaqmay iyo qoyskeeda.
Akshay Kumar Iyo Raveena Tandon: 90-kii jaceylkii ugu saameynta badnaa wuxuu ka dhex dhashay Akki iyo xidigtiisa aan ka harin Raveena.
Raveena ayaa xili dambe saxaafada u sheegtay inay Akshay si qarsoodi ah u guursatay sidoo kalena uu ka codsaday shaqada filim jilista inay joojiso si ay marwadiisa la wada og yahay u noqoto.
Markii Raveena aqbashay dalabkii Akki waxay ogaatay xidigaan inaysan wax walbo dhab ka ahayn sidoo kalena naago kale ku dul wado sida Rekha iyo kuwo kale.
Raveena kalsooni daro ayaa ku dhacday waxayna go’aan ku gaartay inay ka baxdo noloshii Akki ee uu ku cayaari jiray danihiisana ka raacan jiray!
Mithun Chakraborty Iyo Sridevi: 80-kii Bollywood-ka waxaa qabsaday xiriirkii ka dhaxeeyay Mithun oo xaasle ah iyo gabadhii ubaxa ahayd ee la wada jeclaa Sridevi.
Lama yaqaan sida uu Mithun qalbiga kaga xaday Sridevi waxaana la sheegay inay si qarsoodi ah isku guursadeen sanadii 1985 sidoo kalena mudo sedex sano ah Sridevi ahayd naag la qabo oo aan dadka loo sheegin gurigana la geesanin!
Sridevi markii ay caqliyeesatay ayay Mithun ka dalbatay inuu xaaskiisa Yogita Bali iska furo balse Mithun wuu ku gacan seeray dalabkii Sridevi.
Waxaana dhacday in Sridevi iska quusatay sidoo kalena ogaatay in Mithun noloshiisa qayaaliga ah oo ay la wadaageyso aysan waxba u tareyn weyna iska furtay!!
La Soco Qaybta 3-aad Ee Maqaalkaan Xiisaha Badan